Ndezvipi Zvimiro zveGmail? ▷ ➡️ Vateveri ▷ ➡️
Dai 12, 2021 0 mashoko 530
Nekufamba kwenguva Gmail yagadzira zvitsva zvakawanda uye nekuda kwezvikonzero izvo tichakuratidza,
Kukurukurirana Kuona: Gmail inokutendera kuti uone ese anouya uye anobuda maemail, ayo aunogona kuongorora nekumaka zvekare maemail ako apfuura kuti uwane ruzivo. Muchiitiko chekuti iwe haugone kuona maonero aya iwe unofanirwa kupinda:
Iwe unogonesa kana kudzima sarudzo.
Dzosera send: Iwe wakatumira email iyo yausingachadi kuita, kuti iwe ugone kugadzirisa iyo kutumira iwe unofanirwa kuita nekukurumidza, uye iwe enda kuruboshwe kuruboshwe uye tinya pane unndo.
Kukosha mamaki: Gmail inokutendera kuti usarudze kuti ndeapi maemail aunoda kutara akakosha uye ndeapi asiri. Kuti uite basa iri unofanirwa kumisikidza uye kupinda:
Tags: Ivo vanofambisa manejimendi yakawanda kwazvo tsamba. Unogona kuzviita nenzira inotevera:
Enda kune akajairwa marongero.
Enda kune iyo tag sarudzo.
Sarudza sarudzo yaunoda.
Categories: Emails akarongeka otomatiki uye anogona kuwedzerwa nezviziviso, maforamu, zvemagariro kana kukwidziridzwa. Nzira yekuwana iwe unofanirwa kuisa "Matagi" pazasi.
Zorora: Iyi sarudzo inoita kuti email ivanze kusvikira nguva yaunoda, ndokuti, inonyangarika muinbox uye tinogona kuoneka zvakare panguva yaunoda.
Ronga kutumira: Kana iwe uchida kutumira tsamba iyo inosvika panguva yaunenge uchichida, iwe unogona kuimisa nekungodzvanya museve padivi pebhatani rekutumira.
Kuvanzika: Gmail inokupa iyi sarudzo inoita kuti maemail ako ave ega, pamwe chete:
Tarisa iyo yekupera zuva sarudzo.
Dhonza kodhi yekuwana.
Tarisa sarudzo isingakwanise kuendeswa mberi, kuteedzerwa kana imwe.
Multiple Input Tray: Gmail ine basa iri iwe unogona kuwedzera anosvika mashanu emabhokisi emabhokisi anotungamirirwa kune chikuru. Unogona kuzviita nenzira iyi:
Enda kune epamberi marongero
Iyo Multiple Inbox hwindo ichaenzaniswa.
Iwe unogadzirisa iwo auri kuzowedzera.
Mhinduro dzakatemerwa: Unogona kugadzira maemail akareba uye unogona kutara mhinduro kana uchifanira kunyora mhinduro imwechete. Unogona kuzviita nenzira iyi:
Enda kune epamberi marongero.
Dzvanya paPreset Mhinduro.
Asina kuverengwa emaimeri: nyora chinyorwa chinyorwa: chisina kuverengwa muhwindo rekutsvaga.
Namatira mifananidzo: Nesarudzo iyi unogona kudhonza mifananidzo uye mamwe mafaera kuGmail maemail uchishandisa Chrome.
Sanganisa Google Mepu: neizvi unogona kusanganisira mepu mumuviri weshoko.
Mushanduri weGoogle: Wakanakisa mukana uyo iyo Gmail inokupa iwe kuti ududzire email mameseji.
Shandisa Google Docs: Inokutendera iwe kuti ugadzire magwaro nechero email. Zvinyorwa zvakasungirirwa zvinogona zvakare kushandurwa kuita zvinyorwa zvinoenderana.
Shandisa Google Calendar: Unogona kutumira "SMS" mameseji ane basa rinoyeuchidza alarm.
Chinokosha tsamba: Uchakwanisa kuodha yako inbox uye nhoroondo yeemaimeri ako, wozvimisikidza uye uzvifambise mumataresi akasiyana, zvichienderana nezvaunoda iwe. Iwe unogona zvakare kugadzirisa kuburikidza neemail eemail.